သတိ - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်
လီယို Babauta အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ပြောင်းလဲပစ်ရန်အခက်ခဲဆုံးအလေ့အထများ, ဝေးအသုံးပြုပုံလူတွေထိန်းချုပ်ရန်မထင်နိုင်သူများဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကပြောင်းလဲပစ်ချင်ပေမယ့် "willpower" (ငါမယုံတဲ့အသုံးအနှုန်း) ကိုရှာဖွေမထင်နိုင်။
ဆေးလိပ်သောက်, လူမှုရေးအခါသမယ, အခြိနျဆှဲ, အမျက်ဒေါသ, သည်းခံခြင်း, အနုတ်လက္ခဏာအတှေးအနေစဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာ, ကျော်အစာစားခြင်း: ငါ့ထိန်းချုပ်မှုထဲကသလိုပဲသောအရာငါ့အဘို့အချို့။
OK ကို, သင်၏မျက်စိလှိမ့်သော်လည်းဖတ်ရှုခြင်းရပ်တန့်ကြပါဘူး။ ဒါကလျှို့ဝှက်ချက်အချို့မှသိသာထင်ရ, ဒါမှမဟုတ်များလွန်းရိုးရှင်းတဲ့ပေလိမ့်မည်။ ဒီတော့နည်းနည်းပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားကြကုန်အံ့။
ငါတို့အဘို့အမကောင်းကြှနျုပျတို့သိတစ်ခုခုစားရန်တိုကျတှနျးထားကြသည့်အခါကျနော်တို့မကြာခဏအတွက်ပေးလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ထိုသို့ရိုးရှင်းသောကြောင့်ဖြစ်သနည်း အဆိုပါအမှန်တရားကအဲဒါကိုစားရန်ကြောင့်မဆိုးသည်အဘယ်ကြောင့်, ကမစားဘဲနေရန်လည်းခဲယဉ်းမယ့်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော့်ကြောင့်ကိတ်မုန့်ကိုစားသင့်တယ်ဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအမှန်တကယ် rationalizing ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နာကျင်မှုမှတဆင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုချပြီးနေအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာမေးတယ်, အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပဲအသက်ရှင်လျက်, ကျွန်တော်ပြုမူဆက်ဆံထိုက်ပါဘူးမသွားပါစေနိုင်သနည်း
ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပေးစာမပါဘဲတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏ်၏နောက်ခံအတွက်တိတ်ဆိတ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကရှိတယ်။ ထိုသို့ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက်ရဲ့သတိထားမဟုတ်ပါဘူးသောအခါ ပို. ပင်အစွမ်းထက်ပါတယ်။
မရင့်စားအတူ, ဒါပေမယ့်ဘာမှအားဖြင့်ငါတို့သည်မဖြတ်တက်အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားအတွက်လြှော့အရှုံးပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းကလုပ်နေတာ - ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန် beats ။
ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤအစွမ်းထက်အင်အားသုံးနှိမ်နင်းနိုင်ကြောင်း - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ထဲ?
1 ။ သတိထားဖြစ်လာနေဖြင့်စတင်ပါ။ လေ့လာသူဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆွေးနွေးချက်ကိုနားထောင် Start, သင့်စိတ်ထဲဘာကိုစောင့်ရှောက်မည်။ အာရုံစိုက်။ ဒါဟာလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ဘာဝနာကဒီနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ငါသည်လည်းပြေးမှတဆင့်သင်ယူ - တစ်ဦး, iPod တလျှောက်တာမရသဖြင့်, ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာပြေးပြုပေမယ့်စောင့်ကြည့်သဘောသဘာဝနှင့်ငါ၏စိတ်ကိုနားထောင်ရန်ဘာမျှမရှိသည်။
2 ။ ပြုမူဆောင်ရွက်မထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုကြောင်းကိတ်မုန့်ကိုစားရန်သင့်အားတိုက်တွန်း ( "ရုံတစ်ကိုက်!") သို့မဟုတ်ကြောင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သို့မဟုတ် running ရပ်တန့်သို့မဟုတ်အခြိနျမဆှဲပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောနေပေမယ့်သူတို့အညွှန်ကြားချက်အပေါ်ပြုမူဘူးသောအရာကိုနားထောင်ပါ။ ရုံ (စိတ်ပိုင်း) တုန်းပဲထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နားထောင်ပါ။
3 ။ မလွန်ပါစေသော။ , ဆေးလိပ်သောက်ကိုစား, အခြိနျမဆှဲ, ဒါမှမဟုတ်အပြေးဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်း ... မလွန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာယာယီပါပဲ။ အများအားဖြင့်ကသာတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြာရှည်ခံသည်။ အသက်ရှူနှင့်မလွန်ကြကုန်အံ့။
4 ။ အဆိုပါဆင်ခြင်တုံတရားရိုက်တယ်။ သငျသညျတက်ကြွစွာသငျ့စိတျနှငျ့အငြင်းနိုင်ပါ။ ကပြောပါတယ်သောအခါ "One ကိုနည်းနည်းကိုက်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်!", သင်သည်သင်၏အူထောက်ပြပြောသင့်ပါတယ် "ဟုအင်းသောသင်ကပြောသည်အဘယ်အရာကိုသူအပေါငျးတို့ကအခြားအချိန်များရဲ့, အခုငါအဆီရယ်!" ကပြောပါတယ်သောအခါ "အဘယ်ကြောင့် သင်ဤနာကျင်မှုမှတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်တင်ထားတဲ့နေကြတယ် "သငျသညျဆိုသညျကားသင့်ပါတယ်" ဟုဒါဟာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်နာကျင်င်, သင်ယဇ်အဖြစ်ကိုကြည့်ပါလျှင်သူကကိတ်မုန့်ရှောင်ရှားရန်သာနာကျင်င် -? အစား, ကကျန်းကျန်းမာမာနှင့်အရသာကိုင်စွဲဖို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းရှိနိုင်ပါသည် အစားအစာများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး! "
"willpower" ကျွန်တော်တို့ကိုပျက်ကွက်သည့်အခါအဆအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားငါတို့သည်ငါတို့၏စိတ်ကိုသတိထားဖြစ်လာဖို့လိုအပ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့အခါကျနော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကသေးငယ်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အသက်တာကိုပြောင်းလဲပါပဲ။ ယခုတွင်ငါသည်ဘာမှပြောင်းလဲနိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါစောင့်ကြည့်, ငါစောင့်ဆိုင်း, ငါကရိုက်တယ်။ သင်လည်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့အတွေးတွေကိုမိုင်တစ်ထောင်နဲ့တစ်နာရီအပြေးနှုန်းကိုရပ်တန့်ဖို့သတိထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလိုက်လုပ်နေတယ်။ ငါဒီဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပြီး၊ မည်သူမဆို (Williams နှင့် Pellman မှ“ သတိရ”) အတွက်ကောင်းကောင်းအကြံပေးလိုပါတယ်။ ငါ၌ဆိုးသောနေ့ရက်များနှင့်အလွန်ဆိုးသောနေ့ရက်များရှိခဲ့ပြီ၊ သို့သော်ယင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အထောက်အကူပြုခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှမကျဆင်းသွားစေရန်သေချာစေသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာဆိုးရွားလှသည့်နေ့ရက်များသည်ကောင်းမွန်သောသင်ကြားရေးအချက်များဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှင့်သူ့ဟာသူပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သောဘဝအခြေအနေများကိုညွှန်ပြသည်။